Nezvedu - Huru Sirivha Pack (ShenZhen) Co., Ltd.
GS PACK, hofisi yemusoro muHongkong, yakavambwa muna1993, iri padivi peiyo yakanaka Shiyan Lake Zororo. Resort muGuangMing Nyowani Dunhu, Shenzhen, China. Maminetsi makumi maviri rwendo kuenda kuShenzhen International Airport. Isu tiri vamwe vevakuru vezvigadzirwa zvehunyanzvi vanogadzira polyolefin shrink firimu muChina. Uye wekutanga muhombe mugadziri kumaodzanyemba kweChina ane makore anopfuura 19 ane ruzivo mukugadzira yekudzora zvakaputira zvinhu.
Parizvino, isu tinazvo GS Standard, GSS LT, G Shot Slip, GS Super 11 & 10micornP YOKUDZIDZA mafirimu. Nesimba rakasimba rekudzidza, uye neboka rakanangana nekusimudzira iro rinoramba richigadzira dzakasiyana siyana nyowani 5-Layer Co-yakabuda polyolefin kurongedza zvinhu.Stable mhando uye yakakwira kuita mumafirimu edu. Inoita kuti inyatsoenderana neManyoro, Semi-otomatiki uye otomatiki anodzora kurongedza michina.
Fekitori yedu inovhara zviuru makumi maviri metres mita ne7 otomatiki POF5layerCo-Yakawedzeredzwa Shrink mafirimu ekugadzira mitsara. Rich zviwanikwa uye ine simba guta, wepagore goho is12000tons (Kunonyanyisa Upamhi: 3500mm) uye saka ikozvino isu tave hombeProfessional mugadziri mukugadzira zvakatipoteredza zvine hushamwari mhando (P OF) 5-rukoko Co extruded. Polyolefin Shrink Mafirimu muSouth China.
Kunze kwekupedzisira-vashandisi, isu tinogadza vazhinji vatengesi-vese uye vamiririri vekutengesa kuti vawedzere musika kuChina nekune dzimwe nyika. Chigadzirwa chedu chakatumirwa kune dzinopfuura nyika makumi manomwe kutenderera pasirese uyezve nzvimbo dzese muChina, takawana mukurumbira wepamusoro & wakanaka kubva kune vatengi vedu vane mutsa panguva yedu refu-refu & yakagadzika bhizinesi ratidziro mune ese mhiri kwemakungwa uye epamba musika.
Yakakwira mhando, yemakwikwi mutengo uye yakanakisa sevhisi yakaita usa mutungamiri mune inodzora indasitiri yemafirimu.
Remekedza uye unzwisise vatengi, ramba uchipa zvigadzirwa nemasevhisi anodarika zvinotarisirwa nevatengi, uye uve vatengi vekusingaperi. Iyi ndiyo pfungwa yebasa yatagara tichisimbisa nekusimudzira.
Padanho rega rega, chinhu chekutanga chinouya mupfungwa ndechekuti mushure mekunge kambani yashanduka kubva pamusika wevatengesi kuenda kumusika wevatengi, pfungwa dzevatengi dzekushandisa dzakachinja. Takatarisana nezvinhu zvakawanda (kana masevhisi), vatengi vanofarira kugamuchira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro (kana masevhisi). Hunhu pano haungorevi hunhu hwechigadzirwa, asiwo hunosanganisira zvinhu zvakati wandei sehunhu hwekupakata uye nemhando yebasa. Naizvozvo, izvo zvinodiwa nevatengi zvinofanirwa kuzadzikiswa zvizere uye zvakanyanya.
◇ Inofanira kumira pachinzvimbo chevatengi (kana vatengi) pane kumira panzvimbo yekambani kutsvaga, kugadzira uye kugadzirisa mabasa.
◇ Kuvandudza sevhisi sisitimu, simbisa pre-kutengesa, mukati-kutengesa, uye mushure-kutengesa masevhisi, uye nekukurumidza kubatsira vatengi kugadzirisa akasiyana matambudziko mukushandisa kwezvinhu, kuitira kuti vatengi vanzwe kurerukirwa kukuru.
Ach Batanidza kukosha kukuru kune mafungiro evatengi, rega vatengi vatore chikamu mukuita sarudzo, uye vabate maonero evatengi sechikamu chakakosha chevatengi vanogutsa.
◇ Ita zvese zvinobvira kuchengetedza vatengi varipo.
Simbisa nzira dzese dzevatengi. Kugadzwa kwemasangano akasiyana siyana, shanduko yemabatiro ebasa, nezvimwe, inofanirwa kutarisa pane zvinodiwa nevatengi uye nekumisikidza yekukurumidza mhinduro maitiro kune vatengi maonero.
Mutengi anogara akarurama.
Kutanga, mutengi ndiye mutengi wechigadzirwa, kwete anonetsa.
Chechipiri, vatengi vanonzwisisa zvavanoda uye zvekuvaraidza, iri iro chairo ruzivo urwo makambani anoda kutora.
Chechitatu, nekuti vatengi vane "zvakasarudzika kusachinja", kukakavara nemutengi mumwe chete kuri kuitisana nharo nevatengi vese.
Zvinhu zvitatu zvekugutsikana kwevatengi
Kugutsikana kwezvinhu: zvinoreva kugutsikana kwevatengi nemhando yechigadzirwa.
Kugutsikana kwebasa: inoreva chimiro chakanaka chevatengi kune iyo pre-sale, mukutengesa uye mushure mekutengesa sevhisi yezvinhu zvakatengwa. Hazvina mhosva kuti chigadzirwa chacho chakakwana sei uye kuti mutengo wacho unonzwisisika sei, kana uchioneka mumusika, unofanirwa kuvimba nemasevhisi. "Mushure mekutengesa sevhisi inogadzira vatengi vese."
Kugutsikana kwemufananidzo wemubatanidzwa: inoreva kuongorora kwakanaka kweruzhinji rwehuwandu hwesimba uye ratidziro yekambani.
"5S" inoreva kupfupikiswa kwezvidimbu zveChirungu zvemazwi mashanu "CHIMWE, SPEED, SINCERITY, SMART, uye Study".
Iyo "5S" pfungwa ndeye inomiririra sevhisi tsika hutsva, iyo isingori chete nehunhu hwenhambo yemunhu, asi zvakare ine basa rakakura.
Kunyemwerera: zvinoreva kunyemwerera zvine mwero. Magwara ekutenga anofanirwa kufunga nezvevatengi vasati vapa kunyemwerera chaiko. Kunyemwerera kunogona kuratidza kuonga nekushivirira mumoyo, uye kunyemwerera kunogona kuve kunofadza, kune hutano, uye kufunga.
Kumhanya: zvinoreva "chiito nekukurumidza", ine zvirevo zviviri: imwe inomhanyisa, ndiko kuti, edza kushanda nekukurumidza sezvinobvira, uye usarega vatengi vachimirira kwenguva refu; yechipiri ndiko kumhanyisa kwekuratidzira, zviito zvepachokwadi uye zvine hanya zveyekutenga gwara Mwoyo unomutsa kugutsikana kwevatengi, kuitira kuti vasanzwe kuti nguva yekumirira yakarebesa, uye kuratidza simba nezviito zvinokurumidza. Kusarega vatengi vakamirira chiyero chakakosha chehunhu hwebasa.
Kutendeseka: Kana gwara rekutenga riine chokwadi chekushandira vatengi nemoyo wese, vatengi vanozozvikoshesa. Kushanda nemoyo wepachokwadi uye usinganyengeri chinhu chakakosha pfungwa yemutengesi uye musimboti wekubata nevamwe.
Dexterity: Inoreva "smart, yakachena uye yakachena." Kugamuchira vatengi nenzira yakachena uye yakashambidzika, kurongedza zvigadzirwa zvine hunyanzvi, hunyanzvi, uye runako, uye kuwana kuvimba kwevatengi neanochinja uye akangwara maitiro ekushanda.
Tsvagiridzo: Gara uchidzidza uye kugona ruzivo rwechigadzirwa, kutsvagurudza mutengi psychology uye kugashira uye kugona kurarama. Kana iwe ukashanda nesimba kudzidza vatengi 'kutenga psychology, hunyanzvi hwebasa rekutengesa, uye kudzidza zvakawanda nezve hunyanzvi hwechigadzirwa, hauzongogadzirise chete kugamuchirwa kwevatengi, asi iwe zvakare uchave nezvakanaka mhedzisiro.
Ehe, isu tinoita bhizinesi kutanga nekuita mari, asi kwete chete yemari, asi kwete chete yekuita purofiti.
Pundutso ndiwo mubhadharo webasa remhando yepamusoro. Maitiro ekutsvaga purofiti kuita kuti vatengi vadzoke nechido munzvimbo yekugutsikana kuburikidza nekuzvipira senge kwemamiriro ekunze ekunze, uye kutipa iyo mari pasina kunyunyuta uye kuonga.
◇ Usamhanyira kubudirira nekukurumidza, shandura sevhisi ive kupamba, kubiridzira uye kunyengera.
Tambanudza Firimu Vs Shrink Kuputira, Shrink Firimu Pvc, Shrink Kuputira Firimu Rolls, Polyolefin Pof Shrink Firimu, Polyolefin Shrink Kuputira Tembiricha, Polyolefin Pof Shrink Kuputira,